Hevitra mandalo ;Resaky ny mpitsimpona akotry : Ny filàna fandinihana eo am-pitantanana | NewsMada
Hevitra mandalo ;Resaky ny mpitsimpona akotry : Ny filàna fandinihana eo am-pitantanana
Tsy nandingana volana firy ny nandanian’ny parlemanta ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana izay novolavolain’ ny governemanta dia io sahady fa mitsidika ny filàna fanitsiana an’ilay tetibola. Na atao hoe fanararaotana an’ireto fivorian’ny parlemanta tsy ara-potoana izay efa indroa nifanesy sahady, dia mitory izany fa tsy tao ny fijerena lavitra teo am-panomanana an’ilay tetibola izay natao hahafehy ny taona 2018 manontolo. Toy ny mahazatra, samy manana ny fijeriny an’io fanitsiana io. Ao ny mpanohana ny fitondrana izay milaza fa ny fanaovana an’io fanitsiana io dia mitory toe-tsaina izay miezaka hanaja ny mangarahara sy ny tsy hanaovana tompon-trano mihono ny solontenan’ny vahoaka izay ampahafantarina mialoha fa tsy rehefa vita ny fandaniana vao lazaina ny antony nampiasana an’ilay vola. Eo andanin’izany anefa tsy afaka ny tsy hieritreritra ny olona sasany fa raha miseho toy izao ny tsy fahampian’ny fandinihana eo am-pamolavolana ny teti-bola, aiza ho aiza moa izany ny goragora eo am-panatanterahana ny fandaniana.
Ho an’ny mpitazana, volabe no voalaza ao amin’ity fanitsiana ity. Ho an’ny fitondrana dia zava-madinidinika ihany izany miliara maromaro izany. Efa diso zatra mikirakira an’ izany izy ireo Ary arakaraky ny fikirakirana vola toy izany angamba dia manadino ny hasin’ny vola tsy an’ny tena izay mitaky fanajana sy fahamalinana ny fitantanana hatramin’ny iraimbilanja. Matetika ny mpitazana na tsy minia aza dia tsy mahita afa-tsy ny azo kianina. Hamorona aza ataon’ny mpila vaniny maika fa raha tazany makarakara eo amin’ny tsy fanomezana hasina ny volam-bahoaka. Vetivety ny fiitatry ny laza ratsy.
Rano raraka tsy azo raofina. Tany no diavina ka tsy ilaozan’ny tafitohina. Olombelona ve tsy hanota. Mihinam-bary aza misy latsaka… Maro ny fomba fiteny mitaky famelana ho an’ny olona solafaka nefa arakaraky ny sehatra nanotana no afaka anehoana lemim-panahy amin’ny fananana famindram-po. Ny fitantanam-bola-panjakana dia saropady… Indrindra moa fa hitam-poko, tazam-bahoaka fa eo amin’ny toe-piainany tsy mihafihafy ny mpitondra. Sanatria ny fampiadanan-tena no imasoan’ny maro amin’izy ireo. Aiza moa no tsy hitady hifikitra izay eo.